Saxeexida Gudiga • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ma rabtaa inaad ka dhigto Dutchtown meel fiican oo lagu noolaado? Waan isticmaali karnaa kaalmadaada! Qaado daqiiqad si aad u buuxiso foomka hoose oo noogu sheeg waxa aad xiiseyneyso. Waxaan kula socodsiin doonaa kulamada iyo fursadaha kale ee iskaa wax u qabso. Hoos kadhegayso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan guddiyada, ama raadi a muuqaalka guud ee Guddiyada Dutchtown halkan.
Design Muhiimadda Dhaqaalaha Ururka Gudbinta Hubi gudiyada aad xiisaynayso. Hoos ka akhri faahfaahin dheeraad ah.
Inbadan oo ku saabsan Guddiyada
Guddiga Naqshadeynta wuxuu ka shaqeeyaa hagaajinta waxyaabaha jireed ee xaafadda, iyagoo ilaalinaya dabeecadda dhabta ah ee bulshada iyo dareenka booska. Waxaan eegeynaa dhismayaashayada taariikhiga ah iyo meelaha caamka ah waxaanna raadineynaa siyaabo aan ku horumarin karno hantidan qiimaha badan.
Kulamo Khamiista ugu horeysa ee bil kasta.
Wuxuu kulmaa Talaadada labaad ee bil kasta.
Wuxuu kulmaa Khamiista labaad ee bil kasta.
Wuxuu kulmaa Talaadada saddexaad ee bil kasta.
Ammaan, Nadiif, iyo Cagaar
Guddiga Badbaadada, Nadiifka, iyo Cagaarka ah wuxuu kala shaqeeyaa daneeyayaasha xaafadda qurxinta iyo dayactirka, amniga, adeegyada caddaaladda bulshada, iyo dadaallada cagaaran. Ammaan, Nadiif, iyo Cagaar ayaa ka shaqeeya istiraatiijiyado lagu hagaajinayo fikradaha iyo xaqiiqooyinka ka jira Dutchtown iyadoo la sameynayo istiraatiijiyado wax looga qabanayo arrimaha amniga iyo qurxinta
Kulmaya Khamiista saddexaad ee bil kasta.
Ma hubo Maxaa adiga kugu habboon?
Waa caadi! Waxaa laga yaabaa inaad rabto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan guddi gaar ah. Ama waxaa laga yaabaa in shirarku aysan ahayn wax aad adigu leedahay, oo aad kaliya rabto inaad gacan ka geysato abaabulidda nadiifin ama aad ereyga ka hesho dhacdooyinka. Wax kastoo aad rabto inaad sameyso, waan ku faraxsanahay inaan kaa helno caawimaad! Naga soo gaar waxaana ogaaneynaa sida aan uga wada shaqeyn karno sidii aan u wanaajin lahaa Dutchtown.
DutchtownSTL.org Saxiixa Guddiga